ဓါတ်ပုံ | မျိုးရခိုင်
Diplomatic Missions issue statement on humanitarian access to northern part of Rakhine StateMizzima Category: NewsDomestic(File) Rohingya, Muslim men pray duringaprayer insideamosque at Thet Kel Pyin village near Sittwe of Rakhine State, western Myanmar, 03 November 2015. Photo: Nyunt Win/EPA The Diplomatic Missions of Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, the Netherlands, Poland,Spain, Sweden, Turkey and the Unit […] mizzimaSpecial Adviser to the Secretary-General on Myanmar reiterates concerns over Northern Rakhine StateMizzima Category: NewsDomesticMyanmar Military troops take control the road along Kyee Ken Pyin police border guard post near Maungdaw town of Bangladesh-Myanmar border, Rakhine State, western Myanmar, 13 October 2016. Photo: Nyunt Win/EPA Mr. Vijay Nambiar, Special Adviser of The United Nations Secretary-General on Myanmar has reiterated the internationalb[…] mizzimaThais book Suzuki final spot with Myanmar demolition jobAFP Category: LifestyleNewsThailand's Siroch Chatthong reacts after scoring the 3-0 lead during the AFF Suzuki Cup 2016 semi final second leg soccer match between Thailand and Myanmar at Rajamangala National Stadium in Bangkok, Thailand, 08 December 2016. Photo: Diego Azubel/ EPA Thailand thrashed Myanmar 4-0 in Bangkok late Thursday inaruthless displ […] mizzima
အကြပ်အတည်းကြားက ကေအန်ယူမြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲခြင်း မရှိသေးသည့် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ မာနယ်ပလော ဌာနချုပ် ကို လက်လွှတ်ရပြီး နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်း အင်အား လျော့နည်းလာသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များအတွင်း KNU ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် စောဘိုမြကွယ်လွန်ခြင်း၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လုပ်ကြံခံရခြင်းတို့နှင့်အတူ KNU၏ ထိန်းချ […]
Carbon-neutral goal for MaldivesCarbon-neutral goal for Maldives Beach in the Maldives One-third of the Maldives’ economy depends on tourism The Maldives will become carbon-neutral withinadecade by switching completely to renewable energy sources like wind and solar power, its leader has said. President Mohamed Nasheed told the BBC the Maldives understood better than most what would happ […]မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အိုဘားမား အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနှင့် ဆွေးနွေးကမ္ဘာတ၀ှမ်းဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာနဲ့ တခြားကိစ္စရပ်တွေ ဆွေးနွေးဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက် အိုဘားမား ဟာ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံနဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်စကား ပြောခဲ့ ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်တိုးတက်လာစေဖို့ နိုင်ငံတကာရဲ့အားထုတ်မှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို သမ္မတ အိုဘားမား က ခေါင်းဆောင […]Hello world!Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!
ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ ခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ပါတို အေစီမှာပဲ ပျော်ရွှင်နေချယ်လ်ဆီး အသင်းကခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှုးလေး ပါတို ချယ်လ်ဆီး အသင်းက ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားနေသည့် အေစီမီလန် အသင်း၏ လူငယ် တိုက်စစ်မှူးလေး ပါတိုက အေစီမီလန် အသင်းတွင်သာ ဆက်ရှိနေရန် လိုလားပါကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။ အေစီမီလန် နည်းပြဟောင်း ဖြစ်သူ အန်ဆလော့တီ အနေဖြင့် တပည့်ဟောင်း ပါတိုအား ချယ်လ်ဆီးသို့ အရောက် ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင် စားနေသော်လည်း ပါတိုက […]ကာဇတ်စတန်အိမ်ကွင်းတွင် အင်္ဂလန်အားဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ပင်နယ်တီသွင်းယူအပြီးအောင်ပွဲခံနေသူ လမ်းပတ်တတိယဂိုးသွင်းယူနေပုံ ရွန်နီဒုတိယဂိုးသွင်းယူသူ ဟတ်စကီးပထမဆုံးဂိုးအားသွင်းယူသူ ဘယ်ရီ2010 ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက်ခြေစစ်ပွဲများအဖြစ် ကာဇတ်စတန်အသင်းက အိမ်ကွင်းတွင် အင်္ဂလန်အသင်းအား အိမ်ကွင်းတွင် လက်ခံကစားခဲ့ရာ အင်္ဂလန် အသင်းက 0-4 ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်အသင်းအနေဖြင့် ယခုပွဲ အနိုင်ကြောင့်6ပွဲကစာ6းပွဲနိုင် 18 မှတ်ဖြင့် အုပ်စ […]မန်ယူအပယ်ခံဥရောပဂိုးသွင်းဘုရင်ဆု ၂ ကြိမ်မြောက်ရရှိမန်ယူအသင်းတွင်ကစားခဲ့စဉ်ကဒီယေဂိုဖော်လန်ဥရောပရွှေဖိနပ်ဆုအားဒုတိယအကြိမ်ရရှိသူဒီယေဂိုဖော်လန်အက်သလက်တီကိုအသင်း၏ တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒီယေဂိုဖော်လန်မှာ ယခုနှစ် လာလီဂါ ပွဲစဉ်များအပြီးတွင် သွင်းဂိုး ၃၂ ဂိုးထိ သွင်းယူကာ လာလီဂါ ဂိုးသွင်းဘုရင် ဖြစ်သွားခဲ့ယုံသာမက ဥရောပဂိုးသွင်းဘုရင်ဆုကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပြန်ပြီဖြစ်သည်။ ဖော်လန်မှာ အင်္ဂလန်ထိပ်သီး မန်ယူ […]
G20 summit ‘critical for economy’The upcoming G20 meeting is critical if the world wishes to avoid the economic turbulence seen in the 1930s, the UK government has warned. Cabinet minister Douglas Alexander said the summit in London of the G20 group of rich and emerging nations next month “was an important moment”. G20 finance ministers pledged to makea[…]ABOUT • BIOS • VISIT THE OFFICIAL WORLD NEWS AMERICA SITEEach night, BBC World News America with Matt Frei aims to ‘bring the world home’ to American viewers using the unparalleled international reach and resources of BBC News…and to cover stories IN America with the fresh and distinctive flair that only the BBC can provide.မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အိုဘားမား အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနှင့် ဆွေးနွေးကမ္ဘာတ၀ှမ်းဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာနဲ့ တခြားကိစ္စရပ်တွေ ဆွေးနွေးဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက် အိုဘားမား ဟာ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံနဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်စကား ပြောခဲ့ ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်တိုးတက်လာစေဖို့ နိုင်ငံတကာရဲ့အားထုတ်မှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို သမ္မတ အိုဘားမား က ခေါင်းဆောင […]
စံပြကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ခံရ